कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा बगनासकाली
पाल्पा । १४, जेठ । ०७८
बगनासकाली गाउपालिका । जसले जिल्लामै पहिलोपटक कोरोना संक्रमितहरुको घरघरमै औषधी, थर्मोमिटर, अक्सिमिटर वितरण देखी आफै अस्पताल संचालन त्यो पनि प्रयाप्त अक्सिजन सहितको संचालन गर्दै आएको छ, यो कोरोना महामारीमा जनताको सारथ ीबनेर जनताको सेवामा जुट्नुभएका गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्याल संग पाल्पापाटीका सम्पादक सुमन गैरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित एक अन्र्तवार्ताः
कोरोना संक्रमणको यो महामारीलाई गाउपालिकाबाट कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
जव, कोरोनाको दोश्रो संक्रमणकाल सुरु भयो लगत्तै हामीले गाउकार्यपालिकाबाट अक्सिजन सहितको अस्पताल, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुको घरमै उपचार र औषधी वितरण, निशुल्क कोरोना उपचार गर्ने निर्णय गरयौं र सोही अनुरुप गरिरहेका छौं । अहिले बगनासकाली गाउपालिकाका ९ वटै वडाहरुमा होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरु घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच, परामर्श र औषधी वितरण गरिरहनुभएको छ । लक्षण देखिएर समस्या आए बगनासकाली कोभिड अस्पतालमा ल्याएर उपचार गरिरहेका छौं, त्यहा सम्भव नहुने भए अन्य अस्पतालहरुमा पठाउने काम गरिरहेका छौं ।
कोरोना अस्पताल कसरी संचालन गर्नुभएको छ ?
हामीले बगनासकाली गाउपालिका वडा नंं २ पोखराथोकमा कोरोना अस्पताल संचालन गरेका छौं । अस्पतालमा अहिलेसम्म ५ वटा अक्सिजन कन्र्सटे«टर र २३ वटा अक्सिजन सिलिण्डर छन् । कुनै पनि विरामीको लागि अक्सिजन अभाव हुन दिएका छैनौं । गाउपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरु पालो पालो सेवा गरिरहनुभएको छ भने १ जना मेडिकल अधिकृतले समयानुसार सेवा दिनुभएको छ । अहिलेसम्म २० वढी विरामीहरु सोही अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ । बगनासकालीको कोभिड अस्पताल व्यवस्थित छ, छिमेकी पालिकाहरुका विरामी समेत हाम्रोमा आएर उपचार गरी घर फर्केको अवस्था छ । कोरोना अस्पतालमा हामीले विरामीका लागि निशुल्क खानाको व्यवस्था गरेका छौं ।
विरामी बोक्नको लागि एम्बुलेन्स तथा सवारीसाधन कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
बगनासकालीमा सवारीसाधन नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छैन् । हामीले चापपानी स्वास्थ्यचौकीको एउटा एम्बुलेन्स र एउटा सार्वजनिक यातायात –जिप) को व्यवस्थापन गरेका छौं । उनीहरुलाई आवश्यक पीपीई, स्वास्थ्यसामाग्री लगायतका सुविधाहरु पनि दिएका छौं । कतिपय नीजि सवारीसाधनको समेत व्यवस्था गरेका छौं । अस्पताल जानु परयो मैले गाडी पाइन भन्नेहरुलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले व्यवस्थापन गरेका सवारीसाधनहरुले हाम्रो पालिकाको मात्र नभएर अन्य पालिकाहरुको विरामीले समेत सेवा लिएका छन् ।
बगनासकालीमा कोरोना परीक्षणको दायरा कस्तो छ ?
होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका हरुलाई तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी घरमै गएर चेकजाच गर्नुहुन्छ, यदी कोरोनाको संका र लक्षण भएमा पीसीआर तथा एन्टिजेन के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेगर्नुभाछ । हामीले पीसीआर भन्दा एन्टिजेन परीक्षण बढी गरेका छौं । गाउपालिकाको वडाका टोलटोलमा हामीले शिविर चलाएर परीक्षण गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म ३ सय जति परीक्षण भएका छन् ।
होम आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामीले गत वैशाख ९ गते गाउकार्यपालिकाको वैठकबाटै निर्णय गरी होम आइसोलेसनलाई व्यवस्थित बनाउन लागेका थियौं । पालिकाभन्दा वाहिरबाट आउने सबैजना होम आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ । हामी सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरु घरमै गएर उहाँहरुको स्वास्थ्यजाँच गर्नुहुन्छ । हामीले होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरुलाई भिटामिनहरु, च्वनप्रास, डिजिटल थर्मोमिटर, आवश्यकता अनुसार अक्सिमिटर, एन्टिबायोटिक औषधीहरु वितरण गरेका छौं । घरमै निको नभएर कसैलाई समस्या देखिएमा तुरुन्त कोभिड अस्पताल लाने र त्यहाबाट उपचार गर्ने काम गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बन्ुभएकाहरुलाई स्वास्थकर्मीबाट निरन्तर फलो गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म २ सय बढी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेमा घरमै अक्सिजन पुरयाउने काम समेत गरिरहेका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरु घरमै गएर जाँच गर्नुहुन्छ, अक्सिजनको आवश्यकता देखियो भने घरमै अक्सिजन लगेर उपचार गरिरहेका छौं ।
अन्त्यमा, कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गाउपालिकाको सिङ्गो टिमको भुमिका कस्तो रहेको छ ?
यो कोभिड कोरोना महामारी हामीसंग दोश्रो पटक आएको छ । गत वर्षपनि हामी वडा वडामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका थियौं । वाहिरबाट आउदा अप्ठेरो पर्नेहरुलाई सुनौलीसम्म पनि गाडी व्यवस्थापन गरि उद्यार गरिएको थियो ।
अहिलेपनि हाम्रो सिङ्गो टिम दिनरात नभनी काम गरेका छौं । हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरु कर्मचारी सरह नै काम गर्नुभाछ, वडा वडामा पुग्ने विरामीको अवस्था बुझ्ने समस्या परे तुरुन्त रेस्क्यू गर्ने काम गरेका छौं । अहिलेसम्म त्यस्तो जटिलता आएको छैन । हामीसंग प्रप्याप्त अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा ठूलो हामीमा आत्मविश्वास छ, कि हामी हाम्रा नागरिकलाई यो महामारीबाट जोगाउन हरसम्भव लागेका छौं, लाग्नेछौं । हाम्रो यो अभियानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, विभिन्न संघसस्थाहरु, पत्रकार तथा देश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरुबाट सहयोग भएको छ, हामी सवैप्रति आभारी छौं ।